Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် နက္ခတ်ပညာကဏ္ဍ(၁)
ပေါက္ကံ (ပုဂံ) ဘုရင် အနော်ရထာမင်း- (အမှန်အား ဖြင့် အနော်ရထာ ဆိုသော မြန်မာ အမည်သည် “အနုရုဒ္ဓါ” ကို မြန်မာမှု ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။) သည် နတ်ရွာ စံခါနီး အချိန်တွင်- နန်းတော် ရှိ ဗေဒင် ပညာရှိ အပေါင်းတို့က ဘုရင်၏ စန်းပြတ်၊ လွန်းပြတ် ဖြစ်နေသည်ကို သတိပြုမိ၍ (စန်း ခေါ် တနင်္လာကိုလည်းကောင်း၊ လဂ်ကို လည်းကောင်း ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ အင်အား သက်ရောက် မှု များ ထင်ရှားနေ၍) ဘုရင် ဖြစ်သူအား- သတိပေးထားချိန် တွင်- နန်းတော် ယာယီတိုင် တူးရာတွင်- သေနေသော ဖားဖိုအား၊ ဖားမ က ပိုးထားသည်ကို တွေ့ရ၍ - အတိတ်နိမိတ် များ မကောင်းဟု စိုးရိမ်နေခဲ့ကြရပါသည်။
ဤသည်တွင်- ဘုရင့်နောင် ဖြစ်လာမည့် သျှင်ရဲထွဋ် မှ- သူ့ အနေဖြင့် ဘုန်းရှိ၍ ခင်ခင်ကြီး တို့မှ- ကျေးဇူးပြု ကူညီရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောရာ- ခင်ခင်ကြီး မှ- မှူးမျိုး မတ်မျိုး အဆင့်သာ ရှိသော သျှင်ရဲထွဋ် တို့နှင့် ဘုရင့်သမီးတော် - မည်သူက ဘုန်းရှိပါမည် နည်းဟု ချေပ ခဲ့ပါသည်။
နောက်နေ့တွင် ဆရာတော်မှ စစ်ဆေးပြီးနောက်- “ဤဇာတာသည် မင်းဧကရာဇ် ပင် ဖြစ်ရမည်။ ကောင်းလှသည်။ - ဤဇာတာသည် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသော ဘုရင် ဖြစ်၍၊ ရန်ဟူသမျှ အောင်မြင် လိမ့်မည် မှန်သော်လည်း၊ အသက်မရှည်။ လက်နက် ဓားလှံ ထိပါးတတ်သည်။ - ဤဇာတာကား အထက် ဇာတာ နှစ်စောင် တို.ထက် မြင့်မြတ် ကောင်းမွန် လှသည် ဖြစ်၍ ဇာတာရှင်သည် အပြည်ပြည် ထောင်သော မင်းတို့ကို အစိုးရသော မင်းဧကရာဇ် ကြီး ဖြစ်၍၊ သားစဉ် မြေးဆက် မင်းချည်း နှင်နှင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤဇာတာ များကို မည်သူအားမျှ မပြလေနှင့်၊ ယခု အခါ ပြလျှင် ပျက်စီးတတ်သည်။” ဟု သတိပေး စကား မိန်.ကြား ခဲ့ပါသည်။
ဤနေရာတွင်- ဘုရင်အား သျှင်ရဲထွဋ် တင်လျှောက်ပုံမှာလည်း- စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါသည်။
“ဘုန်းတော်ကြီးသော အရှင်မြတ် ဖြစ်ပါ၍-ရာဇ၀တ် ဘေးမှ ပုန်းရှောင် သော်လည်း လွတ်ကင်းနိုင်မည် မဟုတ်သဖြင့်၊ အရှင်မင်းမြတ်၏ မိန့်တော်သံကို နာခံရန် ရှေ.တော်သို. ၀င်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ ဇာတာကို ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်တော် မူစေလိုပါသည်”
ဟု လျှောက်တင် ၍ ဇာတာကို ဆက်သ လိုက်သည်။
“ဤဇာတာသည် ဘုန်းသမ္ဘာကြီးလှသော ဘုရင် ဧကရာဇ် ဇာတာ မျိုး ဖြစ်ချေသည်။ ငါ၏ သားတော် တပင်ရွှေထီးသည် ငရဲထွဋ်ကို ညီအစ်ကို အရင်းမက ချစ်ကြည် လေးမြတ် ပေသည်။ ငရဲထွဋ်အား ရာဇ၀တ် အပြစ်ဒဏ် ပေးလိုက်လျှင် ငါ၏ သားတော်မှာ စိတ်ဒုက္ခ ကြီးစွာ ရောက်ပေတော့မည်။ ထိုမှ တစ်ပါး- ငါ၏ သားတော် ထီးနန်း အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သော အခါ၌ ငရဲထွဋ် ကဲ့သို.သော ဖွားဖက် လူယုံတော် ရှိမှ ဖြစ်ချေမည်။ ငါ့သားတော် တွင် လည်း အခြား ညီတော် နောင်တော် သီးခြားမရှိ၊ တပင် ရွှေထီး ဆိုသည့် အတိုင်း တစ်ပါး ထီးထီး ရှိချေတော့မည်။ ငါ၏ သားတော် ၏ အားကိုးရာ ဖြစ်စေတော့။ သင်း၏ ဇာတာသည်လည်း လွန်စွာ ကောင်းသည် ဖြစ်၍ အားကိုးလောက်သော အာဇာနည် တစ်ယေက် ဖြစ်ချိမ့်မည်။ သမီးတော်မှာ- တပင် ရွှေထီးထက်ပင် အသက်ကြီးပေသည်။ ငရဲထွဋ် နှင့်မှ သက်တူရွယ်မျှ ဖြစ်သည်။ ငရဲထွဋ်လည်း ဧကရာဇ် တစ်ဆူ ဖြစ်မည့်သူပင်၊ ငါ၏ သမီးတော် သားတော်များ ဒုက္ခမရောက်စေသင့်- ၄င်းတို. အလိုရှိသည့် အတိုင်း ပြည့်စုံစေတော့ အံ့ ”
ဘုရင် မင်းကြီးညိုသည်- ဗေဒင် လွန်စွာ တတ်ကျွမ်းသူ ဖြစ်ရာ- ဇာတာကို ကြည့်လိုက်သည် နှင့်- ဟု နှလုံးဖြူသော အလား “ငရဲထွဋ် နင့်ဇာတာ ကောင်းလှသည်။ ကောင်းမွန်စွာ သိမ်းဆည်းထား လေ” ဟု မိန့်ဆိုလျှက် ဇာတာကို လှမ်းပေးလိုက်သည် သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
- သာမာန် အဆင့်တွင်- မင်း၏ သေဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်း ခံရသော်လည်း- ကြောက်လန့် တကြား ထွက်ပြေးခဲ့သူ မဟုတ်။
- မိမိထက် အဆမတန် များသော ရန်သူတို့ကို တိုက်ခိုက်ရန် အတွက်- နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် လိုသော စိတ်များ ပျောက်စေရန် ဖောင်ဖျက် တိုက်ပွဲ ၀င်ပြီး အောင်လံထူခဲ့သည်။
- ငယ်ရွယ်၍- ရူးမိုက်မှုတို.ကြောင့် သေရည် အရက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်ပြီး- တိုင်းပြည် ကိစ္စကို အာရုံမစိုက်သော- ဘုရင်ဖြစ်သူ တပင်ရွှေထီးကို နန်းချပြီး ဘုရင်လုပ်ရန်- မှူးကြီး မတ်ရာတို့က ကြိမ်ဖန်များစွာ တိုက်တွန်းသော်လည်း- မိမိ၏ အောင်မြင်မှု အတွက်- သစ္စာမဖေါက်ခဲ့။
- တောင်ငူ မြို.ကို အုပ်ချုပ်သော မင်း အဖြစ်မှ- ထိုင်းနိုင်ငံ (ဆူကိုထိုင်း- (မြန်မာ အခေါ် သောက္ကတဲ) - ဇင်းမယ်၊ အယုဒ္ဓယ တို့သာမက၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို တို့အပါ အ၀င် မဲခေါင်မြစ်၏ အနောက်ဘက် တစ်ခြမ်းလုံးကို အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သော ဧကရာဇ် မင်း အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့သည်။
- တိုင်းပြည်ကို တည်ထောင်ရန် အတွက် စစ်တိုက်ရသော်လည်း- ရန်သူတို.အပေါ်တွင် မရက်စက်သည့် အပြင်- သိမ်းပိုက်ရာ နိုင်ငံမှ ဘုရင်တို့၏ သားသမီးများကို မွေးစားကာ ပညာ သင်ပေးခဲ့သဖြင့်- ထိုင်းနိုင်ငံမှ ၄င်းအား “ဖုကျနာ ဆစ်ဗ် (အရပ် - ဆယ်မျက်နှာ နှင့် ပြည့်စုံသောသူ)” ဟု ခေတ်အဆက်ဆက် ရိုသေ လေးစားခဲ့ရသည်။
Labels: and astrology, Myanmar History၊ မြန်မာ့သမိုင်း၊ နက္ခတ်၊ ဗေဒင်
ငယ်၂ကတည်းကပင် တပင်ရွှေထီး အရေးတော်ပုံ ကျမ်းဖတ်မိသည်မှစ၍ လွန်စွာပင် လေးစား အားကျမိသော မင်းတစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။
Astrology Researcher (နက္ခတ် ဗေဒင် သုတေသီ)